The Gardener: 2011-01-02
တစ်ခါတုန်းက မုဆိုးတစ်ယောက်ဟာ Mazu Daoyiဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။ ဇင် ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်။
"အရှင်ဘုရား၊ မြားမှန်နေတဲ့သမင်များမတွေ့မိဘူးလား"။ ရဟန်းက မဖြေဘူး။ ပြန်မေးလိုက်တယ်။
"မြားတစ်ချောင်းနဲ့ တကာလေး သမင်ဘယ်နှစ်ကောင်ပစ်နိုင်လဲ။"
"ရဟန်းကတော့ မြားတစ်စင်းနဲ့ သမင်တစ်အုပ်ကို ပစ်ခတ်နိုင်တယ်။"
"သမင်တွေဟာ တပည့်တော်တို့လို အသက်ရှိပါတယ်ဘုရား။ ဘာလို့တစ်အုပ်ကြီးကိုပစ်ရပါ့မလဲ ဘုရား"
"တကာလေးပြောသလိုဆို သမင်လည်း အသက်ရှိ၊ တကာလေးလည်း အသက်ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ သမင်ကိုပစ်မလဲတကာလေး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပစ်လိုက်လည်းရတာပဲမဟုတ်လား။"
"ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘယ်လိုပစ်ခတ်နိုင်ပါသလဲဘုရား ..."
ရဟန်းကပြောတယ် ....။ တကာလေးဟာ အမြင်မှောက်မှားမှုတွေများနေတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒါတွေ အဆုံးသတ်ပါပြီ ..............။
ဒီပုံပြင်လေးဟာ ဇင် သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "point directly at the heart" ကိုပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ပစ်ခတ်ဖို့မေ့နေတဲ့သားကောင်ဟာ သက္ကာယဒိဌိ များဖြစ်နေမလား။ လိုင်ဘရီထဲမှာ ကျွန်တော်ဆက်တွေးနေမိပါတယ်။ တစ်ချိန်က မုဆိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Shigong Huizang တစ်ယောက်ရော .... ကိလေသာတွေကို ဘယ်လောက်အထိ ပစ်ခတ်မိသွားခဲ့သေးလည်းဆိုတာကိုတွေးရင်း သူ့အတွက်ဝမ်းသာနေမိတယ်။
... တစ်ခါတစ်လေ ...တိတ်တဆိတ်လေးနေပြီး ကိုယ့်ရန်သူ အစစ်ကို ပစ်ခတ်ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်............။
>>>>>>>>>Notes from my notebook. Written in last4months ago.
>>>>>>>>>Dedicated To my dear friends.